Isitolo setiyi ne-Luna Pet - Messina
08:30 am - 13:00 pm / 15:30 pm - 20:00 pm
Konke okudingayo ukuze unakekele isilwane sakho
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-2)
Tea neLuna Pet Shop a Messina, nge-Santa Maria di Gesù 7-9, isitolo esinezimpahla eziningi ezinikezelwe ezifuyweni. Okubonakalayo okukhulu kwe Izesekeli zezilwane zazo zonke izinhlobo zihambisana nokuthengisa okuthengiswayo kwe Ukudla kwezilwane lemikhiqizo emihle kakhulu. Abathandi bezimboni baphinde banikeze insizakalo ebalulekile Ukuqeqeshwa kwezilwane kanye nekhono lokukhetha umngane wakho omncane nge Isitolo sezilwane zasekhaya ifakwe izinhlobo eziningi ezifuywayo.
Itiye lezinja zasekhaya neLuna eMessina - iWide Assortment
Itiye lezilwane zasekhaya neLuna isedolobheni lase Messina inkomba yokubhekisela kubo bonke abathanda izilwane zabo futhi bazifunele hhayi kuphela imikhiqizo engcono kakhulu kepha nezinye izesekeli ezimnandi nemidlalo ejabulisayo. Kusuka Tea noLuna ungathola konke okudingayo noma ongathanda ukukuthengela abangane bakho abancane. I-assortment enkulu kakhulu, nekhwalithi eqinisekiswe ngemikhiqizo ehlonishwayo emakethe, inikezwa abathengi ngabasebenzi abanomdlandla kulo mkhakha, abakwazi ukweluleka ngokuthenga okuhambisana kahle nezidingo zakho kanye nezilwane ezifuywayo. Ungakhetha kusuka ku-repertoire enkulu ye Izesekeli zezilwane (i-kennels, i-leash, amajazi njll) kodwa futhi nemidlalo emnandi nevuselelayo enama-athikili athile ngezinhloso zakho.
Tea noLuna è I-Pet Shop yazo zonke izilwane ezifuywayo: Izinja, amakati, izinyoni, onogwaja kanye namagundane amancane, ngaphandle kokukhohlwa umhlaba wonke weUkugcinwa kwezinhlanzi ngokudla okuhlukahlukene kwezinhlanzi zakho nezinto zokwenza i-aquarium yakho ihlukile futhi inhle. Ukunakekela abangane bakho abanezinyawo ezine ngendlela efanele kubalulekile empilweni yabo futhi ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuthenga okuphakelayo okulungele izidingo zabo zokudla okunempilo kuzo zonke izigaba zokukhula kwabo.
Itiye lezilwane zasekhaya ne-Luna eMessina - Konke kungokwakho Animali
Tea noLuna I-Pet Shop, eMessina, ine-assortment enkulu yamathoyizi, Izithwali, ama-Leashes, ama-Kennels, ama-Cage nakho konke okudingayo kubangani bakho abanezinyawo ezine ngokuqaphela okukhulu okukhokhelwa kuKhwalithi Nokuphepha. Ungathenga nayo yonke leyo mikhiqizo yokunakekela i-itching, i-dermatitis kanye nezinkinga zobhubhane ngokujwayelekile, lezo zokuhlanzeka njengokuhlanza izindlebe, amehlo namazinyo, ukubulala izinambuzane nezinye izinto ezifana nokuxebuka, imidlalo, ukudla okulula, izembatho nokunye okungenza impilo yengane yakho ibe lula futhi kokuhlupheka mahhala.
I-Pe Shop Tea e Luna - Ukuqeqeshwa kanye Isitolo sezilwane
Itiye lezilwane zasekhaya neLuna indawo efanele a Messina, nge UMariya Oyingcwele kaJesu 7-9, lapho unganakekela khona umngani wakho ngenxa ye-assortment egcwele kahle Ukudla kwezilwane lemikhiqizo emihle kakhulu yokwakhiwa nekhwalithi, kepha futhi nakuMikhiqizo ye-Veterinary Parapharmaceutical Products, ukuqinisekisa umngani wakho omuhle kakhulu emakethe ngazo zonke izidingo. Tea noLuna akayedwa I-Pet Shop ezinikezelwe kuzo zonke izilwane ezifuywayo kodwa futhi nesipiliyoni kanye nobuchwepheshe kuzo Ukuqeqeshwa Kwezilwane Nezitolo Zezilwane zasekhaya lapho ungathola futhi ukhethe umngani wakho omethembayo, uthembela ochwepheshe bezimboni abakhetha kuphela izilwane ezivela kwimvelaphi eqinisekisiwe. Uma usithanda isilwane sakho esincane futhi ufuna ukukhetha okungcono kakhulu kuye-ke thembela ku-the passion kanye ne-assortment enkulu I-Pet Shop Tea neLuna eMessina.
Ikheli: Nge-Santa Maria di Gesù, 7-9
Ucingo: 090 3719046
Umakhala ekhukhwini: 389 0216655
Inombolo ye-VAT: 02502190834